I-Luxury 4 BR indlu kwilali yaseGalway. Ibroadband yeFayibha
Ikhaya elikhululekileyo elinee-BR ezi-4 kunye namagumbi okuhlambela ama-4 kwilali yaseCaltra, imiz emi-3 ukuya eMountbellew. Izinto eziluncedo kwingingqi zibandakanya iikhefi / iindawo zokutyela, iindawo zokudlala, ukuhamba ehlathini / ukuhamba ngebhayisekile / iindawo zepikiniki, iKlabhu yeGalufa yaseMountbellew. Ibekwe kwindawo esembindini kwindawo ephambili yasentshona yaseIreland isixeko saseGalway (imizuzu eyi-45), iTuroe Pet Farm (imizuzu eyi-23), iBattle of Aughrim Centre (20 min), iCoole Park/Thoor Ballylee (50 min), Cong kunye neAshford Castle (1 hr) iBurren / Cliffs of Moher (1 hr 40 min), Knock Shrine (58 mins).
Isicwangciso esivulekileyo esongezelelweyo sokuhlala / igumbi lokutyela libonelela ngazo zonke intuthuzelo kwiindwendwe ezindwendwelayo. Iincwadi, idatha yabakhenkethi, imidlalo yebhodi ikufuphi. I-Smart TV enendawo yeNetflix iya kuvumela iindwendwe ukuba ziphumle kwaye zibukele iinkqubo ezizithandayo okanye zikhangele kwiWebhu. Ikona yokufunda epholileyo ukuba undwendwe lufuna nje ukuphumla, ukufunda okanye ukubhala.
Ikhitshi langoku lifakelwe i-w / i-cooker, i-microwave, izixhobo zokupheka, i-tableware, i-dishwasher- zonke zikufuphi ukuze zibe namava okutyela afanelekileyo ukuba uyafunwa. Iicondiments zokupheka ezisisiseko ziyabonelelwa kwaye iti nekofu ziyancomeka.
Ibhedi yobungakanani beSuperking kwigumbi lokulala eliphambili iya kubonelela ngonyango olugqibeleleyo kusuku oluxakekileyo lokuhlola. Eli gumbi linegumbi lokuhlambela le-en-suite kunye negumbi lokuhlala elipholileyo. Igumbi lokulala eli-2 liza neebhedi ezimbini kunye negumbi lokuhlambela le-en-suite. Igumbi lokulala le-3 lelinye igumbi elikhulu elinebhedi ephindwe kabini kwaye lijongene negumbi lokuhlambela elikhulu elinendawo yokuhlambela kunye neshawari. Igumbi lokulala eli-4 lisezantsi, linebhedi ephindwe kabini kunye nesitulo esinamavili esifikelelekayo kwigumbi lokuhlambela le-en-suite. Onke amagumbi okulala aneemfama ezimnyama, iiwodrophu ezakhiweyo, iitafile ezisecaleni kwebhedi kunye nezibane. Ibhedi ekumgangatho ophezulu, iitawuli kunye nezinto zangasese zibonelelwa kulo lonke.
Indawo yoncedo/igumbi lokuhlambela impahla ligumbi elahlukileyo ngaphandle kwekhitshi elinoomatshini bokuhlamba kunye nokomisa (kubonelelwe ngomgubo wokuhlamba kunye nesithambisi selaphu).
Izixhobo ezikhawulezayo kwilali yaseCaltra zibandakanya indawo yokugcina ivenkile enesitishi segesi kunye neposi engaphaya kwendlela ukusuka kwindlu, ii-pubs ezimbini zasekhaya, indawo yokutyela ethatha indawo yokutyela, indawo yokudlala yoluntu entsha kunye nendlela yokuhamba yasekhaya ebizwa ngokuba yiGolden Mile. Icawe yasekhaya yakhiwa malunga no-1840 kwaye inamatye amangcwaba asusela ngo-1707. Kufutshane neMountbellew, kukho iindawo zokutyela, iikhefi, iikhemisti, iBhanki/ATM, iivenkile ezinkulu, iivenkile kunye neendawo zentselo. Iindawo zokuzonwabisa zasekhaya zibandakanya ukuhamba kwamahlathi okubanzi, iindlela zokuhamba ngebhayisikile kunye neendawo zepikiniki eMountbellew Demesne, indawo yokudlala yabantwana kunye nebala legalufa elihlala lidumile eli-18 eMountbellew Golf Club. IZiko leeEquestrian laseSlieve Aughty kunye nePaki yoLonwabo kunye neFama yeSilwanyana saseTuroe (eLoughrea) kukuhamba nje okufutshane (imizuzu engama-20). Uncedo lwesixeko saseGalway luhambo olufutshane ngokufanelekileyo.
Ilali yaseCaltra inelizwe elizivayo, izibonelelo zayo zasekhaya, ukuhamba njalo njalo ngelixa ikufutshane needolophu ezinkulu kunye nesixeko saseGalway. Ibonelela ngesiseko esiphumlayo esisembindini sokukhenketha eNtshona yeIreland njengoko iindawo ezinomtsalane zifikeleleka zonke ngohambo lwemini.
Izixhobo ezikhawulezayo kwilali yaseCaltra zibandakanya ivenkile eluncedo enesikhululo serhasi, iPosi, ii-pubs ezimbini zasekhaya, indawo yokutyela ethatha indawo, indawo yokudlala yoluntu entsha kunye nendlela yokuhamba ebizwa ngokuba yiGolden Mile. Icawe yendawo yakhiwa malunga ne-1840 kwaye inamatye amangcwaba asusela ngo-1707.
Ecane neMountbellew, kukho iindawo zokutyela ezikhethiweyo, iikhefi, ikhemisti, iBhanki/i-ATM, iivenkile ezinkulu, iivenkile kunye nee-pubs. Iindawo zokuzonwabisa zasekhaya zibandakanya ukuhamba kwamahlathi kunye neendawo zepikiniki eMountbellew Demesne, indawo yokudlala yabantwana kunye nebala legalufa elihlala lidumile eli-18 eMountbellew Golf Club. IZiko leeEquestrian laseSlieve Aughty kunye neFama yeSilo samahashe iTuroe kunye nePaka yoLonwabo (eLoughrea) kukuhamba nje okufutshane (imizuzu engama-20) kwaye ziintandokazi eziqinileyo zosapho. Isixeko saseGalway sibonelela ngamathuba amaninzi okubona kunye nokuthenga.
Uya kuba nakho ukufikelela kweli khaya ngokuzimeleyo ngexesha elifanelana nohambo lwakho. Uya kufumana iNcwadana eyamkelekileyo phambi kokuhlala kwakho eya kunika imiyalelo kuzo zonke izixhobo zendlu, ukufudumeza njl njl. Le ncwadana iya kuba neengcebiso zendawo kunye neengcamango zohambo lwemini njl. ukuhlala kwakho. Uza kukwazi ukunditsalela umnxeba, nge-imeyile okanye ngemiyalezo yakwa-Airbnb.
Uya kuba nakho ukufikelela kweli khaya ngokuzimeleyo ngexesha elifanelana nohambo lwakho. Uya kufumana iNcwadana eyamkelekileyo phambi kokuhlala kwakho eya kunika imiyalelo kuzo zo…